डम्बर नेपालीको नयाँ गीत सुईटर च्यातिएको सार्वजनिक (भिडियो) – Khabar Silo
डम्बर नेपालीको नयाँ गीत सुईटर च्यातिएको सार्वजनिक (भिडियो)
Posted on January 29, 2020 Author admin Comment(0)
काठमाडौं । चर्चित गायक डम्बर नेपाली नयाँ गीत ‘सुईटर फाटेको’ भिडियो प्रिमियर भएको छ । अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन विच भिडियो सार्वजनिक गरिएको घोषणा गरियो । गायक नेपालीकै स्वय शब्द संगीत रहेको गीतको भिडियो निर्देशन प्रविन भट्टले गरेका हुन् ।
भिडियोमा सम्झना रिमाल, विशाल घिमिरे, सोमु गुरुङ र जिना ब्रिजीले अभिनय गरेका छन् भने डम्बर नै भिडियोमा मुख्य भुमिकामा देखिएका छन् । ग्रामिण परिवेशको माया अनि गरिवीको पीडालाई गीतमा मुख्य रुपमा उतारिएको गायक डम्बरले बताए । ‘आफ्नो प्रेमिकाको छेउमा कसलाई ‘टिपटप’ बनेर हिड्न मन लाग्दैन र ? गायक डम्बरले भने ‘ तर प्रेमिकालाई भेट्न सुईटर च्यातिएर समस्या भएका समस्या भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
लामो समय देखी नेपाली साँगीतिक यात्रामा अनवरत रुपमा लागिरहेका नेपालीले ‘सुईटर फाटेको’को बाट आशावादी भएको बताए । गायक नेपालीको ‘मेरो जिवनबाट जाने भए जाँउ तर अन्तिम पल्ट भेट्न आउ ’ बोलको गीतले छिन्नलता पुरस्कार पाएको थियो ।
‘म हिन्दु धर्म मान्छु’ भन्दै झुटो नाम लिएर गौरीको हात माग्न पुगेका थिए शाहरुख खान
Posted on November 21, 2020 Author khabar silo
एजेन्सी । शाहरुख खानले आफ्नो विवाहका बारेमा हालै अनौठो खुलासा गरेका छन् । हिन्दु धर्म मान्ने ब्राम्हणको छोरी गौरीसंग प्रेम गरेका शाहरुखले गौरीको हात माग्दा उनका बुवाआमालाई झुटो बोलेको बताएका छन् । गौरीको बुवाआमालाई आफु हिन्दु हुँ भन्दै नाम पनि गलत बताएको खुलासा आफैले गरेका छन् । शाहरुखलाई बलिउडमा किङ खान उपनामले चिनिन्छन् । २ […]
‘सेल्फी किङ्ग’मा विपिनको यस्तो लुक्स
चलचित्र ‘सेल्फी किङ्ग’को छायांकन ३३ दिनमा सकिएको निर्माणपक्षले जनाएको छ । दशैं अघि र दशैंपछि गरेर दुई सेड्यूलमा चलचित्रको छायांकन सकिएको निर्माणपक्षले बताएको छ । काठमाण्डौं, भक्तपुर हुदै सोलुखुम्बु, खुर्कोट, घुर्मी लगायतका स्थानमा गरिएको छ । ‘सेल्फी किंङ’को नामले परिचित एक चर्चित हाँस्य कलाकारले कला यात्राको दौरान आफुले पाएको सफलता र व्यक्तिगत जीवन बिचको सन्तुलन […]
एक अर्का बिना बाच्नँ नसक्ने भएपछि भयो केटा केटा बिच धुमधाम बिहे, (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
Posted on September 6, 2021 Author khabar silo
संसारमा हरेक दिन रोचक घटना हरु घटिरहने गर्दछ l पछिल्लो दिनहरुमा केटाकेटा बिच बिवाह भएको हामिले सुनेका हौ देखेका पनि हौ अहिले सोही परिदृश्य अनुरुप केटिकेटिले समेत बिवाह गरेका छन् । बिदेशी समाजमा यस्तो घटना पहिले देखिनै सुन्दै आए पनि नेपाल मा निक्कै कम मात्रामा यस्तो घटना हुने गर्दछ l यस्तै एक घटना हाल नेपाल […]
साउथले ‘साङ्लो’को फ्लेबर चोर्ने सम्भावना छ : विराज भट्ट
जगदम्बा सिमेन्टलेद्वारा गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई यति ठुलो रकम सहयोग ! हेर्नुहोस